Ukubheka i-African Tourism Board enamalungu emazweni angama-26
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Ukubheka i-African Tourism Board enamalungu emazweni angama-26
Airlines • Airport • Izindaba Zezinhlangano • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba ZaseBurundi • Ukuhamba Ngebhizinisi • ICameroon Breaking News • I-Chad Breaking News • IComoros Breaking News • Izindaba ZaseCongo • Izindaba Zokuphumula zaseCote d'Ivoire • Izindaba Ze-Djibouti • Izindaba Zase-DR Congo • IGibhithe Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha zase-Eritrea • Izindaba zase-Ethiopia • Izindaba zeGabon Breaking • Izindaba ZaseGambia • IGhana Breaking News • Izindaba zikaHulumeni • Investments • IKenya Breaking News • Izindaba ZaseLesotho • I-LGBTQ • Izindaba ZaseLiberia • ILibya Izindaba Ezintsha • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba Zokubhebhana zase Mali • Izindaba zaseMauritius Breaking • Izindaba ZeNiger • Izindaba zaseNigeria • Abantu • ISenegal Izindaba Ezintsha • Izindaba zaseSeychelles • Izindaba Ezintsha ZaseSierra Leone • ISomalia Breaking News • INingizimu Afrika Izindaba Ezintsha • ISouth Sudan Izindaba Ezintsha • ISudan Breaking News • Izindaba ZaseTogo • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ZaseTunisia • Izindaba zase-Uganda • IZambia Breaking News • Izindaba ZeZimbabwe
The Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika ukubambisana komphakathi nezizimele ngomyalezo owodwa oqinile. Lo mlayezo ukutshela umhlaba ukuthi i-Africa Tourism isiba yindawo eyodwa futhi ivulekele ibhizinisi. I-Afrika izwekazi eliphephile futhi lamukela izivakashi, izimali, kanye nokubambisana ngezandla ezifudumele. I-Africa Tourism Board yamukela nabaholi bezokuvakasha abavela emazweni ase-Afrika nasemhlabeni wonke ngezandla ezivulekile ukuletha ubuholi, ukuqamba namathuba okutshala imali.
Abaholi bezokuvakasha bayibona le ntshisekelo yokuthi i-Afrika ikhule ndawonye. Ukushiya ipolitiki emuva nangokuheha abaholi bezokuvakasha ukuthi bajoyine le nkundla entsha yokunqamula ukujaha. I-African Tourism Board imayelana nokwanda kwamabhizinisi, ukutshalwa kwezimali kanye nokuqwashisa okuhle ngaleli zwekazi esivame ukukhohlwa.
Njengomunye wabaxhasi bokuqala nelungu lokusungula, Iqembu le-iFREE eHongKong iyinkampani yomhlaba wonke ephayona izindlela ezintsha zokuhlala zixhumekile emhlabeni wezokuxhumana nezokuxhumana ngamaselula.
Kusukela kuzingcingo zamazwe omhlaba kanye nezixazululo zokuzulazula kwedatha kuya ekuxhumekeni kwe-Wi-Fi kanye nemikhiqizo yezokuvakasha eyingqayizivele, i-iFREE Group izibekele umgomo wokudiliza imigoqo nokusondeza umhlaba ndawonye, ​​futhi nakanjani i-Afrika isezinhlelweni zayo.
Esanda kwakhiwa Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika kusekelwe esenzweni sakamuva esenziwe yi- I-International Coalition of Tourism Partners (ICTP)
Imithombo yezokuvakasha iyayithanda i-Afrika futhi iyakhombisa. Ngenyanga eyodwa intatheli nezincwadi ezivela kuwo wonke amagumbi omhlaba zaba abangane bezindaba ukusekela iBhodi Yezokuvakasha yase-Afrika.
I-African Tourism Board inenyanga nje encane izelwe futhi ibisifonele amalungu ayisisekelo. Ingxoxo esebenzayo iyavela. Kuphela namuhla i-African Tourism Board isivele yamukele amalungu amasha ayi-100 kanti abaningi banesifiso esikhulu sokuba ngamaphayona kulo mbutho we-Afrika, ngabantu base-Afrika abasekelwa umhlaba wonke.
Inhlangano ihlinzeka ngokukhuthaza okuhambisanayo, ucwaningo olunokuqonda, kanye nemicimbi emisha kumalungu ayo.
Ngokubambisana namalungu omkhakha wangasese nakahulumeni, iBhodi Yezokuvakasha yase-Afrika (i-ATB) ithuthukisa ukukhula okuzinzile, inani, kanye nekhwalithi yezokuvakasha nezokuvakasha kusuka ngaphakathi nangaphakathi kwe-Afrika.
Inhlangano inikela ngobuholi kanye nezeluleko ngazodwana futhi ngokuhlanganyela ezinhlanganweni ezingamalungu ayo.
Inhlangano yanda emathubeni okukhangisa, ezobudlelwano bomphakathi, ezotshalomali, ezokubeka uphawu emikhakheni, ezokuqhakambisa kanye nezokusungula izimakethe ze-niche.
The Ukuphepha kwe-ATB yezokuvakasha nenhlalakahle summit eSierra Leone futhi kuhlelwa amanye amazwe amathathu.
I-PR & Marketing, ukufinyelela kwabezindaba
Imibukiso yase-USA Road
Amalungu okwamanje abhalisiwe emazweni alandelayo:
I-Congo (Rep of the)
I-ATB isemkhankasweni wokumemezela ibhodi lokuqala labaHoli Bezokuvakasha base-Afrika futhi isezinhlelweni zokuhlanganisa imisebenzi eqhubekayo yabanye ababambisene ne-African Tourism ngaphansi kophahla olulodwa.
Ukufunwa kwe-CEO sekuqalile futhi kubizwa osaziwayo bezokuvakasha bezimpawu bayasabela.
Inhlangano isivele yafika ibanga elide kusuka isimemezelo sokuqala eshicilelwe ngu eTurboNews ngo-Ephreli 6, i-2018.
Ukufunwa kwamalungu asungula i-African Tourism Board kusaqhubeka.
Ukujoyina i-ATB kulula. Vele uvakashele www.africantourismboard.com bese uchofoza ku sihlanganyele njenge member.